Sambany no natao tamin’ny renivohi-paritra ny Universiade fihaonana ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina natao ho fampiraisan-kina ny mpianatra eny amin’ny oniversite enina. Andiany fahefatra izao tanterahina any Ambositra izao ary hifarana ny asabotsy 24 novambra. Vonona ny kianja sy ny fampiantranoana ka mpandray anjara manodidina ny 800, avy amin’ny faritra maro no tonga ao Ambositra, amin’izao fotoana izao, hiatrika ny Universiade. Efa nanomboka ny fifaninanana amin’ny taranja iombonana : ny foot, ny volley, ny basikety, ny hand, sy ny taranja samirery : ny course de fond, ny course de vitesse, ny vikin-dava, ny tennis de table, ny lawn tennis. Eo amin’ny kolontsaina, manana ny mampiavaka azy ity Universiady satria hisy ny sokela, ny katro, ankoatra ny fanorona izay efa fanao isan-taona, hisy ihany koa ny savika eo amin’ny fanatanjahantena.
Ho fiarovana ny ain’ireo ankizy mpianatra eny amin’ny EPP sy ho fandaminana ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra dia napetraka ny takelaby famantarana sy marika fiampitana eny amin’ny arabe amin’ireo toerana maro, manoloana ny EPP eto an-dRenivohitra. Niarahan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), sy ny ONG Lalana namolavola ny tetikasa Alfa nahafahana nanao izany. EPP enina teto an-dRenivohitra, toy ny teny : Ankadifotsy, Antsahabe, Ampasanimalo, Ambanidia, Ambohimiandra ary Manakambahiny no nametahana izany takelaby izany. Mbola hitohy eny amin’ireo EPP hafa indray manerana ny boriborintany enina eto an-dRenivohitra ny asa.
Nanomboka androany ary haharitra roa andro ny fanadinana CAP /EP ho an’ny mpampianatra manerana ny Nosy. Diplaoma hatolotra ny mpampianatra aorian’ny fifaninanana atao izany ary hanampy azy amin’ny fitadiavana asa eo anivon’ny fanabeazana.